नियुक्ति: सबै-मा-एक तपाईंको व्यापार को लागी अनलाइन तालिका Martech Zone
शनिबार, अक्टोबर 24, 2020 शुक्रवार, अक्टुबर 23, 2020 Douglas Karr
ब्यापारहरू जुन सेवामा आधारित अफरहरू छन् लगातार ग्राहकहरूको लागि उनीहरूको सेवाहरू खरीद गर्न वा तिनीहरूको समय सुरक्षित गर्नका लागि विधिहरूको खोजीमा। अपोइन्टमेन्ट जस्तो एक अपोइन्टमेन्ट समय निर्धारण उपकरण यो प्राप्त गर्नका लागि निर्बाध तरीका हो किनकि तपाईं सुरक्षित अनलाइन भुक्तान, तत्काल बुकिंग सूचनाहरू, र शून्य डबल बुकिंगका थप लाभहरूको साथ २ 24 × online अनलाइन बुकिंगको सुविधा र लचिलोपन प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यो मात्र होईन, सबै इन-वन उपकरण नियुक्ति तपाईको व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न, स्टाफको उत्पादकत्वको अनुगमन गर्न र सहि मार्केटिंग सुविधाहरुको साथ तपाईको व्यवसायलाई बढाउन मद्दत गर्दछ।
अनलाइन समय तालिका मिलाउनुहोस्: समाधान सिंहावलोकन
नियुक्ति एक अनलाइन अपोइन्टमेन्ट समय निर्धारण सफ्टवेयर हो जुन स्वचालित रिमाइन्डरहरू, भुक्तानी प्रसंस्करण, मोबाइल अनुप्रयोग, र अधिक धेरैको साथ अनलाइन बुकिंगको लागि सजिलै प्रयोग मञ्च प्रदान गर्दछ! यसले तपाइँलाई नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गरेर र अवस्थित एकलाई कायम राखेर तपाईंको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न र बढाउन मद्दत गर्दछ।
ट्युटरिंग, सैलून, स्पा, स्वास्थ्य र फिटनेस, व्यावसायिक सेवाहरू, सरकारी र निजी क्षेत्र, चिकित्सा कार्यालयहरू, व्यापार संचालन, र टोली, इत्यादि जस्ता विभिन्न उद्योगका 200,000 भन्दा बढी व्यवसाय मालिकहरूले नियुक्तिमा उनीहरूको भरोसा राख्छन्।
अपोइन्टमेन्टले तपाईंको व्यवसायलाई निम्न लाभहरूको साथ मद्दत गर्दछ:
२× × Online अनलाइन बुकिंग
अपोइन्टमेन्टका साथ तपाईका क्लाइन्टहरूले तपाईको साथ कुनैपनि समयमा, कहिँ पनि, उनीहरूको सुविधाको लागि अपोइन्टमेन्टहरू समयबद्ध गर्न सक्दछन्। यो २× × rece रिसेप्शनिस्टको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले तपाईंको तालिका प्रबन्ध गर्दछ र फोन वा ईमेल प्रयोग गरेर म्यानुअली बुकि appoint अपोइन्टमेन्टबाट तपाईंलाई बचाउँछ। ग्राहकहरूले आफ्नो बुकिंग पृष्ठ उनीहरूको सुविधामा पहुँच गर्न सक्दछन्। यसबाहेक, तपाईंले आफ्नो व्यापार घण्टा बाहिर बुक गरीएको अपुइन्टमेन्टहरू बारे चिन्ता लिनु पर्दैन!
तपाईका क्लाइन्टहरूले सजिलैसँग सजिलो बुकिंग प्रक्रियाको साथ आत्म-तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ। आवश्यक पर्दा, तिनीहरूले केहि सेकेन्डको मामलामा उनीहरूका अपोइन्टमेन्टहरू रद्द वा पुन: तालिका गर्न सक्छन्! अपोइन्टीले तपाईंलाई तपाईंको बुकि page पृष्ठ अनुकूलित गर्न दिन्छ तपाईंको ब्रान्ड छविसँग मिलाउन।
बहु-च्यानल लीड जेनेरेसन
तपाईंको व्यावसायको अनलाइन दृश्यता बढाउनुहोस् र तपाईंको ग्राहकहरू अवस्थित हुनुहोस् - गुगल, फेसबुक वा इन्स्टाग्राम! अपोइन्टि बुकिंग एकीकरणहरूले तपाईंलाई थप ग्राहकहरू पाउन सोशल मिडियाको शक्ति प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
अपोइन्टमेन्टको साथ, तपाईं 'अब बुक गर्नुहोस्' बटन थप्न सक्नुहुन्छ तपाईंको गुगल माईबोजेनेस, फेसबुक, र इन्स्टाग्रामले अत्यधिक व्यस्त प्रोफाइल विजिटरहरूलाई भुक्तान गर्ने ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न। पुस्तक अब बटन प्रोफाईल आगन्तुकहरु लाई तपाइँको व्यापारको साथ अनुप्रयोग भित्र एक भेट अनुसूची निर्धारित गर्दछ।
गुगल एकीकरणको साथ हाम्रो रिजर्भको साथ, तपाईंको ग्राहकहरूले सजिलैसँग गुगल खोजी, नक्सा र RwG वेबसाइटबाट सजिलै पत्ता लगाउन र बुक गर्न सक्दछन्। यस तरिकाले, तपाईले पैसा पनि तिर्ने बिना नै नयाँ ग्राहकहरू उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ!
अपोइन्टमेन्टले तपाईंलाई कुनै ग्राहकहरू लाई ईमेल र एसएमएस मार्फत रिमाइन्डरहरू पठाउन मद्दत पुर्‍याउँछ अप-अप शो र अन्तिम मिनेट क्यान्सेन्सनहरू कम गर्न। तपाईंको ग्राहकहरूले सजिलैसँग शेड्यूल गर्न सक्दछ यदि उनीहरूले यो बनाउँदैनन् वा पहिले नै सूचित गर्दछ ताकि तपाईं खाली स्लटहरू भर्न सक्नुहुनेछ र कुनै राजस्व गुमाउनु हुँदैन।
नियुक्ति बुकिंग वा चेकआउटको समयमा ग्राहकहरूको लागि तत्काल भुक्तान विकल्पहरू प्रदान गर्न लोकप्रिय भुक्तान अनुप्रयोगहरू जस्तै पेपैल, स्ट्रिप, स्क्वायरसँग एकीकृत गर्दछ।
तपाईं बुकिंगको समयमा पूर्ण, आंशिक वा कुनै अनलाइन भुक्तानी स्वीकार्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन पूर्वसूचनाहरूले तपाईंलाई क्याजुअल बुकिंगबाट बच्न र रद्द संरक्षण प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
अपोइन्टि स्क्वायर POS एकीकरणले अपोइन्टमेन्ट विवरण स्वत: भर्दछ र तपाइँको ग्राहकहरूको लागि द्रुत र चिल्लो चेकआउट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्दछ।
वास्तविक समय तालिका क्यालेन्डर
नियुक्तिको वास्तविक-समय क्यालेन्डरले तपाईंलाई एक दिनमा तपाईंको दिनको तालिका एक नजरमा हेर्न दिन्छ, एकल स्क्रिनमा बहु स्टाफ कार्यक्रमहरूका साथ। कुनै पनि खाली स्थानहरू पहिचान गर्नुहोस् र खाली समय स्लोट भर्नुहोस् कुशल समय ब्यवस्थापनका लागि।
तपाईं आफ्नो उपलब्धता कुनै पनि समयमा क्यालेन्डरबाट परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै यसले ड्र्याग र ड्रप सुविधाका साथ सजिलै पुनः शेड्यूल गर्न अनुमति दिन्छ।
अपोइन्टीले लोकप्रिय व्यक्तिगत वा प्रोफेशनल क्यालेन्डरहरू जस्तै गुगल क्याल, आई क्याल, आउटलुक, र अधिकको साथ दुई तर्फी समक्रमणलाई पनि समर्थन गर्दछ ताकि तपाईं सँधै आफ्नो दिनको तालिकाको शीर्षमा रहन सक्नुहुनेछ।
स्टाफ र ग्राहक व्यवस्थापन
अपोइन्टमेन्टले तपाईंलाई आफ्नो स्टाफलाई उनीहरूको लगईन प्रमाणहरू दिन्छ, जसले उनीहरूलाई उनीहरूको तालिका, उपलब्धता र पातहरूको नियन्त्रण लिन अनुमति दिन्छ। यो तपाईंलाई स्मार्ट / व्यस्त संसाधनको लागि नियुक्ति विनियोजन गरेर, र उत्पादकत्व वृद्धि मा, तपाईंको कर्मचारी चलाखीपूर्वक मद्दत गर्दछ।
अपोइन्टमेन्टको सीआरएम तपाईंलाई र तपाईंको स्टाफलाई उनीहरूको व्यवहार ट्र्याक गरेर व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। महत्त्वपूर्ण विवरणहरू भण्डारण गर्नुहोस् जस्तै इन्टेक फारम प्रतिक्रियाहरू, भेट गतिविधि, खरीद इतिहास, नोटहरू र अधिक एक ठाउँमा।
तपाईं बुद्धिमानीपूर्वक गतिविधि, प्रतिक्रिया र वफादारी जस्ता मुख्य ग्राहकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि सही ग्राहकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न र तपाईंको प्रयासहरूलाई प्रभावी ढ channel्गले देखाउन समूह जस्ता समूहहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
अपोइन्टमेन्ट नियुक्ति बुकिंग अनुप्रयोगको साथ, तपाईं आफ्नो फोनमा तपाईंको सम्पूर्ण व्यवसाय प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ। द गोमा अनुप्रयोगको माध्यमबाट समय तालिका, भुक्तानी, स्टाफ क्यालेन्डर, अपोइन्टमेन्टहरू र अधिक प्रबन्ध गर्नुहोस्।
जूमसँग अपोइन्टिग एकीकरणले तपाईंलाई अनलाइन परामर्श, रिमोट मिटि ,हरू, कन्फरेन्सहरू, भर्चुअल क्लासहरू, वा वेबिनारहरू तालिकाबद्ध गर्न अनुमति दिन्छ। यस तरिकाबाट तपाईं तपाईंको व्यापारको पहुँच विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न समय क्षेत्रहरूमा, विश्वव्यापी रूपमा।
प्रत्येक बुकिंग स्वत: एक जूम बैठक लिंक उत्पन्न गर्दछ र भर्चुअल वर्ग वा सत्र स्वचालित रूपमा तपाइँको पात्रोमा थपियो।
भर्चुअल अपोइन्टमेन्ट विवरणहरू बुकिंग कन्फर्मेसन पृष्ठमा प्रदर्शित हुन्छन्, र सबै सहभागीहरूलाई स्वचालित ईमेल / पाठ पुष्टिकरण र अनुस्मारक सूचनाहरू पठाइन्छ। सामेल हुन, ग्राहकहरूले केवल जूम लिंक क्लिक गर्नुपर्नेछ र उनीहरूको जूम अनुप्रयोग सुरू हुन्छ!
एनालिटिक्स र रिपोर्टि।
नियुक्तिको एनालिटिक्स र रिपोर्टि youले तपाईंलाई तपाईंको मुख्य प्रदर्शन सूचकहरू ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ जस्तै अपोइन्टमेन्टहरूको संख्या, ग्राहक सन्तुष्टि, बिक्री, कर्मचारीहरूको प्रदर्शन र वास्तविक समयमा अधिक। जहिले पनि तपाइँको प्रदर्शनको शीर्षमा रहनुहोस् र डेटा व्यापार संचालित निर्णयहरू लिनुहोस् यी व्यापारिक मेट्रिक्स सुधार गर्न।
नियुक्तिसँग सुरू गर्नुहोस्
Simple साधारण चरणहरूमा तपाईंको व्यवसायको लागि अप्टुइन्ट अप सेट गर्नुहोस्:
सेट - तपाईंको सेवाहरू र काम गर्ने घण्टा प्रविष्ट गर्नुहोस्। बफर्स ​​थप्नुहोस्, तपाईंको वास्तविक जीवनको तालिका प्रतिलिपि गर्न समयहरू रोक्नुहोस्।
शेयर - तपाईंको बुकिंग पृष्ठ URL ग्राहकहरूको साथ साझा गर्नुहोस्। यसलाई तपाईंको वेबसाईट, गुगल मेरो व्यवसाय, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, र अन्य च्यानलहरूमा थप्नुहोस्।
स्वीकार - ग्राहक २ 24 × from बाट बुकिंग स्वीकार्नुहोस्। ग्राहकहरूलाई स्व-तालिका, पुनः शेड्यूल, र तिनीहरूको सुविधामा रद्द गर्न दिनुहोस्।
अपोइन्टमेन्ट अनुसूची डोमेनमा एक उद्योग नेता हो। फ्रिमियम मूल्य निर्धारण मोडेलको साथ, यसले सबै आकारका व्यवसायहरूलाई समर्थन गर्दछ। यसले ठूला उद्यमहरू / व्यवसायहरूको लागि उनीहरूको अनुकूलित ब्रान्डि and र विशिष्ट तालिका आवश्यकताहरू पूरा गर्न कस्टम-मेड अपोइन्टमेन्ट समयबद्धन सफ्टवेयरको विकास गर्दछ।
अपोइन्टमेन्टको साथ तपाईंको व्यवसाय बढ्न तयार हुनुहुन्छ?
आज तपाईंको १--दिन नियुक्ति परीक्षण सुरू गर्नुहोस्!
टैग: नियुक्तिहरूनियुक्तिपात्रोअनलाइन नियुक्ति तालिकाअनलाइन तालिकाजुमजूम अपोइन्टमेन्टहरू